Tsara ny vehivavy - Ny vanin-taona mafana ao Amalfi - tovovavy Indiana
Tsara ny vehivavy — Ny vanin-taona mafana ao Amalfi — tovovavy Indiana
Tsara ny vadiny — Ny vanin-taona mafana ao Amalfi (vehivavy Tsara) dia Hatsikana horonantsary avy ny taona. Nitarika ny Mike Barker, ny rindra an-tsehatra nataon’i Howard H. vato nanoratra momba ny fototry ny Play Lady rivotra ambany Mpankafy ny Oscar Wilde avy ny taona. Ny asa atao ao anatin’ny taona. Stella Fianarana naka toerana tao amin’ny New York ny fiaraha-monina dia tsy ho vita sy ny dia lavitra noho ny vola ny toky firavaka mba Amalfi. Misy fotsiny sisa Tompo rivotra-ny mahantra amin’ny vadiny Meg nandritra ny vanim-potoana. Tompo Darlington, malaza Playboy izay mianatra Meg ny zava-nitranga ho amin’ny raharaham-barotra. Raha ny fandehany fa ny rivotra mahantra sy Darlington avy any Londres. Toy ny roa te-handeha amin’ny Meg ny Club-hihinana, ny rivotra dia mahantra amin’ny alalan’ny antso an-tariby nampahatsiahy. Mihaona amin’ny Stella Fianarana. Taty aoriana, dia mametraka azy an-trano ary nanokatra ny kaonty any amin’ny Banky ho anao. Darlington mahatonga Meg ny fandrosoana, dia mahatoky ny vadiny azy. Meg mianatra ao amin’ny raharaham-barotra Stella dia Mianatra mba hahafantatra, niezaka ny tena dikany akanjo. Stella mianatra ao amin’ny Fikambanana ny manan-karena, indroa nisara-panambadiana Tupy mahalala, ny naniry avy hatrany ho anao. Rivotra, ambany ny enta-mavesatra mba Meg ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana, ny Tupy Stella — betsaka ny tsy hafaliany amin’ny rivotra-mahantra — hitondra. Darlington-kevitra ny Meg fa rivotra mahantra efa Mianatra ny fifandraisana amin’ny Stella. Fifanandrifian-javatra, Meg nahita fotoana fohy talohan ny fitsingerenan’ny taona nahaterahan’i ny vadiny fa tsy tapaka ny lehibe kokoa vola mba Mar.
Fa izy dia ny azy ihany no vola varotra mba hanampy, tsy misy intsony mino Meg azy. Amoron-dalana, ny mpanatrika nahalala fa Stella dia Hianatra Meg ny reny dia mba hamela ny zanany vavy ho toy ny zaza kely, dia nisy indrafo. Ao amin’ny Antoko Meg dia feno fahatezerana manoloana ny fanitsakitsaham-bady ny vadiny, toy izany koa ny dikany akanjo, ny Stella ny Fianarana efa nanandrana ao ny Fivarotana. Stella hita ao ihany koa ny akanjo ity, izay mandray anjara isan-karazany afangaro-DEHIBE sy fahasarotana ao amin’ny Antoko. Meg mandresy lahatra tombo-kase ny olona ao amin’ny Fikambanana mba raiso, mizotra mihitsy ny Yacht, ny Darlington fiainantsika. Mar. Ny fianarana dia izao re fa rivotra mahantra mba hanana fifandraisana aminy sy mahatsapa fa Meg azy Darlington te hamitaka. Izany dia manaraka Meg ary mametraka azy ireo amin’ny zava-poana ny Yacht-to-teny, toy ny fiaraha-monina iray manontolo hita, ny Yacht, talohan ny vehivavy roa, dia afaka miala. Stella ny Fianarana maneho ny Toe-javatra toy ny hoe izy no efa antenaina Darlington, izay Tupy mamaha ny teo aloha niditra an-tsehatra. Rivotra mahantra mihavana indray amin’ny Meg, raha tsy misy ny tena fampiasana ny Vaovao izay Mar. Ny fianarana ny reniny sy ny rivotra mahantra ihany no extorted, avy ao aoriana. Stella Fianarana toa ny mpankafy ny Megs indray. Tianao, na ny rivotra ianao mahantra mampitandrina Meg mba hilaza fa izy dia ny reninao, inona ianao, dia sasao ny filazana ny fifandraisana amin’ny Meg ny vadiny. Fa, alohan’ny anareo nilaza izany zava-miafina izany, Meg mianiana mba hilaza amin’ny hafa ny momba azy. Meg nianiana»reniny,»fa ianao dia ho madio ny anjely, noho izany diso ny fitadidiana. Izany, Stella nilaza na inona na inona intsony. Stella ny Fianarana dia voatery ny mahantra fizarana ny Rivotra, Handao Amalfi. Ny rivotra mahantra toy izany mihavana. Rehefa Handao ny Amalfi morontsiraka amin’ny fiaramanidina, Stella no manambara fa Tupy amin’ny fiaramanidina. Meg nilaza taminy ny tantara, Stella ny fanomezam-boninahitra ny masony naverina tamin’ny laoniny. Izany rehetra dia sambatra sy afa-po.
Ny fianarana dia ny vehivavy tsara (Tsara vehivavy), afa-tsy Tompo Darlington dia mampiahiahy ny fitondran-tena. Azy, fa ny famelan-keloka, satria izy no mahay milalao Bridge, toy ny Contessa Luchino milaza. I petera Travers nanoratra tao amin’ny gazety-boky Rolling Stone. Tamin’ny volana janoary, ny kalitao ny sary — afa-tsy ny ny Tom Wilkinson ho eo»tsy matihanina»sy ny hoe»mampivarahontsana»(«Ny manao tandavan avy tsy matihanina mba mahatsiravina»). Ny lalao Helen ny alika dia»indrafo lozabe»ampitahaina amin ny Bibidia endrika. Kenneth Turan nanoratra tao amin’ny Los Angeles Fotoana. Tamin’ny febroary, ny Horonan-tsary dia natao ho»tsara»sy ny kely voly. Ao anatin’ny ezaka mba manavao ny tantara, very be dia be, izay nanao ny play tsy hay hadinoina. Ny fanehoana ny Johansson hanao zavatra dia solon-ary tsy mandresy lahatra ny alika manao bibikely variana. Amin’ny lexicon of film iraisam-pirenena dia nanoratra fa ilay Sarimihetsika dia»melancholic Hatsikana.»Mametraka»ny ara-tsosialy fakany»ny naka sary ny tantara an-tsehatra kely, tsy fröne»toy ny betuliches fitaovana ampahany fa tsy ny haingon-trano fotsiny». Ny Horonan-tsary dia voatifitra teo amin’ny italiana tanàna Amalfi, Artan, Cavallo, Roma, sy ny Sorrento. Efa ny tontolo izao fizarana voalohany. Septambra, aseho ao amin’ny Toronto Film Iraisam-pirenena ny Fetibe, ary avy eo dia eo ny sasany hafa ny fetiben’ny film. Ny Horonan-tsary nilalao teatra ao ETAZONIA momba ny Dolara AMERIKANA, ao amin’ny British sarimihetsika. pound Sterling sy ny espaniola eo ho eo.
ny iray Tapitrisa Euro
← Ahoana no ahafahan ny bandy fotsy hihaona sy ny daty ny tovovavy Indiana. Indiana Mampiaraka
Fifandraisana Pelaka Mampiaraka, tokana pelaka, azo jerena an-tserasera sy ny →